Biochemical Incubator, Agụụ Ihicha oven, Muffle oven - Drick
1.Fahrenheit / Celsius n'efu c ...
DRK-GHP Electrothermal mgbe nile okpomọkụ inc ...
★ 1. Onyinye ụzọ nhazi ...
DRK-810 8-Channel Pesticide fọdụrụ Rapid Tester
DRK-810 Channel ọgwụ ahụhụ R ...
DRK-FX-D306 Sox Fatdị radị Mwepụta Abụba ...
1. Ngwa jikota ...
DRK255 Constant okpomọkụ ma na iru mmiri chambe ...
Ngosipụta arụmọrụ 1. S ...
DRK250 temperaturenọgide na-enwe okpomọkụ ma na iru mmiri chambe ...
DRK-GC-1690 Ethylene oxide, epichlorohydrin esi ...
DRK-GDW Andlọ Nnwale Ule Dị Elu na Ala
Shandong Drick Analysis Instruments ngalaba., Ltd. na-etinye aka na nyocha, n'ichepụta ọrụ na teknụzụ maka ụlọ nyocha na nyocha ụlọ ọrụ.
Ngwa nke agụụ ihicha oven
Ọkt / 20/2020
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ nke DRICK mepụtara na-ebelata ihe ize ndụ a n'oge usoro ihicha n'ime ụlọ mkpo ọkụ. Ebumnuche nke usoro a bụ iji nwayọ kpoo ngwaahịa dị elu nke nwere mmiri ma ọ bụ ihe mgbaze na-enweghị ịgbanwe arụmọrụ ha. ihicha ...
Ka ọ dị ugbu a, a ka achịkwabeghị ọrịa ọrịa ahụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa kpamkpam, mba na mpaghara dị iche iche na ngalaba ahụike na ngalaba ahụike na ngalaba nyocha na-agbaso usoro nzaghachi na-arụsi ọrụ ike.
Ndị ọrụ okike, nkwonkwo mgbochi ọrịa, ọsụ ụzọ nke usoro nyocha ngwaahịa PPE!
Kemgbe ntiwapụ nke ọrịa zuru ụwa ọnụ, akụnụba ụwa na ndụ ndị mmadụ na mba na mpaghara dị iche iche emetụtala n'ọkwa dịgasị iche iche. Site na gọọmentị mba ruo na ụlọ ọrụ na ngalaba dị iche iche, ha niile na-achọsi ike na azịza mgbochi ọrịa. AICụ ọgwụ Instrument ha ...